Soo saaraha Ugu Wanaagsan ee Alfa-Ketoglutaric Acid - Cofttek
Cofttek waa soosaaraha budada Alpha-Ketoglutaric Acid ee ugu fiican Shiinaha. Warshadeena waxay leedahay nidaam maareyn wax soo saar oo dhameystiran (ISO9001 & ISO14001), oo leh awood wax soo saar bille ah 800kg.
Alfa-Ketoglutaric Acid (328-50-7) Smamnuucista
Qaaciddada Molecular: C5H6O5
Miisaanka kelli: 146.11 g / mol
Karkarinta: 320 ° F (160 ° C)
Maqnaanshaha dhibic: 236.3 ° F (113.5 ° C)
micne ah: 2-Oxoglutaric acid,
Furaha gudaha: KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Xalka: Ku milma aalkolada, DMSO, iyo methanol
Xaaladda Kaydinta: 2-8 ° C
Codsiga: Alpha-ketoglutarate waxaa loo isticmaalaa cudurka kelyaha; xanuunka mindhicirka iyo caloosha, oo ay ku jiraan infekshannada bakteeriyada; dhibaatooyinka beerka; indho-beelka indhaha; iyo infekshannada khamiirka soo noqnoqda. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa hagaajinta habka bukaanka kelyaha ee qaata borotiinka habka loo yaqaan 'hemodialysis'.
Imaanshaha: Caddaan cad budada cad
Alfa-Ketoglutaric Acid (328-50-7) Spectrum NMR